UPOPU UFRANCIS: VUKA! UPHENGULULO LWEALBHAMU - IINDABA
Abapapa abadlulileyo bakhuphe ii-albhamu, kodwa uPopu Francis ngowokuqala ukuya ngqo pop. Ndikunye nabadibanisi ababandakanya iswami yentsomi, umbethi wemidlalo yeqonga, kunye nomntu owayelilungu leqela lase-Italiya le-rock yaseLe Orme, Vuka! ikhona kwindawo engummangaliso engaqhelekanga phakathi kobunzima beeyure ezimbini kunye nevidiyo yokugaya abantu.
'Upopu uFrancis ukhupha i-albhamu ye-rock-prog' inokuba sisiphelo esingcono kuphela xa uhlobo lwalukhutshiwe 'nge-chillwave,' kwaye nangona kunjalo, silapha. UJorge Mario Bergoglio, oneminyaka engama-78 ubudala waseArgentina, yindoda engama-266 yokubamba isikhundla sikapopu; ungowokuqala ukugweba ngokuthe ngqo ukutshintsha kwemozulu kwaye avuselele inkolo yenkululeko kwaye abe usebenze njenge bouncer , kwaye nangona oopopu bexesha elidlulileyo bekhuphe iingoma zeklasikhi / zelitolika, uPope Francis ungowokuqala ukuya ngqo pop.
UPopu John Paul II, ngokomxholo, ukhutshiwe Ntathu ii-albhamu ngexesha lopopu. Zaziqulathe umculo oyingcwele weklasikhi, kwaye akukho namnye owakhuthaza izikhumbuzo ezimnandi ngabaphetheyo ababakhululayo (iirekhodi zikaPopu 'zathumela igolide zabuya neplatinam', enye ishishini ngaphakathi Kutshanje kufakwe kwiBillboard ). UPopu uFrancis unokwahluka: Nguye uPapa wethu, uPopu ka Iifayile zikaKim Kardashian kwaye Imivini kwakhona . Kule veki, uzifumene engumxholo #Iimbonakalo I-hashtag eyayicinga ukuba ichitha iiraps Eminem kwaye UDrake . Indawo ye-Holy See ikhula ngokungalawulekiyo, kwaye luhambo lokuva esi siphithiphithi senziwe ngomculo kwiminyaka ye-Spotify.
Ndikunye nabadibanisi ababandakanya iswami yentsomi, umbethi wemidlalo yeqonga, kunye nomntu owayelilungu leqela lase-Italiya le-rock yaseLe Orme, Vuka! ikhona kwindawo engummangaliso engaqhelekanga phakathi kobunzima beeyure ezimbini kunye nevidiyo yokugaya abantu. Kufana nokuba usele isipha sesiraphu sokukhohlela kwaye waya Uncedo oluphilayo: IVatican. Wonke umkhondo ubeka isixhobo se-Barnes kunye ne-Noble-CD yecandelo lesixhobo, ngamanye amaxesha ngesandi esongezelelweyo okanye isandi sedwa, ukwakha amandla okumisa xa uPapa Francis eqala ukuthetha. Umkhondo wokuvula ngu-'Anuntiuntio Vobis Gaudium Magnum! ', IsiLatin esithi' sibhengeza ngovuyo olukhulu. ' Ukulandela elo binzana kuthathwa njenge 'habemus papem,' okanye 'sinopopu omtsha,' kwaye intetho ekhutshiweyo yeyokuqala kaPopu Francis emva kokumiselwa. Kungumzuzu onamandla wokukhumbula, kuphela ukuyekiswa kancinci yinto yokuba izixhobo zomculo zivakala njenge-IMAX eneeholide.
Izihloko zengoma kwi Vuka! , indawo yokukhuza-ilayishwe kwaye yagqitywa ngaphandle, ngeendlela ezininzi zingcono kuneengoma ngokwazo. Kukho umkhondo wotshintsho lwemozulu ('Cuidar El Planeta'); enye ingoma ethi isihloko siguqulela 'ICawe ayinakuba yi-NGO!', kwaye enye ngeSpanish eguqula 'Ukholo luphelele, alunamanzi!' Kukho ingoma ngesiTaliyane isihloko sayo siguqulela 'Musa ukuloba ithemba!', Kunye nomkhondo wokuvala ngesiPhuthukezi esithi isihloko siguqulela 'Yenza le nto akuxelela yona!' Kuphela yingoma yesihloko (epheleleyo, 'Vuka! Yiya! Phambili!') Ebizwa ngegama lesiNgesi.
Kuyo, uPopu uFrancis uthetha nesihlwele emva kwemoto enamavili ikatala yombane, icandelo leempondo ze-cinematic, umzila othulwe ngokukhululekileyo ngumnqwazi omkhulu. 'Kuluxanduva ukuba uhlale uphaphile,' utshilo, kwisihlwele esiseMzantsi Korea, njengokukhanya okuhlaziya ipiyano ngasemva. 'Ukungavumeli uxinzelelo, izilingo kunye nezono ukuba zenze buthathaka ubuhle bethu bobungcwele.' Kodwa, ukuba eli cwecwe libonisa, ubuhle ayisosandi sobungcwele ncam.
Kodwa kukho into entle ngale albhamu; yiyo ikhona . Upopu uFrancis, osele engoyena mntu upopu womntu kunayo nayiphi na kwimbali yakutshanje, uphakanyiswe ubuntu nangakumbi kukungaziphathi kakuhle kweli cwecwe lomculo, uhlobo lwawo olothusayo, intliziyo yakhe enobuninzi. Umvelisi wecwecwe uDon Giulio Neroni — owayekhuphe icwecwe likaPopu John Paul II lowe-1999; iVatican ikwishedyuli yokukhutshwa ngokukhululekileyo, kodwa ishedyuli yokukhutshwa ngokufanayo-uxelelwe Amatye agiqekayo ukuba 'wazama ukuthembeka ngokuqinileyo kubufundisi kunye nobuntu bukaPapa Francis: uPopu wencoko yababini, iingcango ezivulekileyo, ukubuk' iindwendwe. ' Waphumelela. UChill Pope, inkokheli yabantu abayi-1.2 yezigidigidi, bayakucela ukuba wamkele eli cwecwe lingumnqa njengeGenesis yakho yokomoya, indlela yakho engenasiphelo yokuthi ewe.
james blake isandi sokuthula
Justin bieber icwecwe elitsha 2017
nini i-coachella kulo nyaka
UMary musa ukulila nkosana
indlela esisebenza ngayo gomez
hlala uvukile erykah badu